सलमान खानमाथि जोन अब्राहमको कमेन्ट, ‘रेस ३’लाई बनाए मजाक ! « News24 : Premium News Channel
सलमान खानमाथि जोन अब्राहमको कमेन्ट, ‘रेस ३’लाई बनाए मजाक !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमले आफ्नो जुनै फिल्मले पनि दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिदै आएका छन् । जोन फिल्म ‘सत्यजेव जयते’को सफलतापछि अर्को फिल्म ‘बाटला हाउस’को सुटिङमा ब्यस्त छन् ।
भर्खरै अभिनेता जोनले सोसल मिडियामा कलाकारहरुलाई ट्रोल बनाउने र हाइयेष्ट पेड कलाकारहरुको लिष्टमा सामेल लगाएतका मुद्धाहरुमा सवाल गरेका छन् । जोनले इन्टरटेनमे्न्ट पोर्टललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘किन स्टार्सको लागि सबै भन्दा बढी कमाउनेहरुको लिष्टमा सामेल हुनु जरुरी छ, मैले बुझ्न सकिन । हामी कलाकार हौं, हाम्रो पहिचान हाम्रै कामबाट हुन्छ ।’
उनले् थपे, ‘केही कलाकारहरु पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार हाइयेष्ट पेड स्टार्सको लिष्टमा छ, तर जसको फिल्म सुपर फ्लप रह्यो ।’ जानले भने, ‘तपाईले २०१८ को हाइयेष्ट पेड कलाकारहरु हेर्नुहोस् । जहाँ सलमान खानको नाम टपमा छ । तर उनको फिल्म ‘रेस ३’ पूरै फ्लप बन्यो ।’
त्यती मात्र होइन जोनले यो पनि भने कि, ‘केही कलाकारहरु एयरपोर्टमा फन्नी आउटफिटमा आफै देखिन्छन्, तर उनीहरुले भन्छन् कि ट्रोल बनाए, जुन् उनीहरुलाई मन पदैन । मैलै पैसा लिएर बिहे पार्टीमा डान्स गर्न सक्दिन । मैले यसरी डान्स गर्नु गलत भन्दिन तर मैले चाँही यसरी यस्तो गर्न सक्दिन ।’